နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Warning : Health Care Issue Alert (သတိ - နှလုံးသား ဖျားနာလွယ်သည်။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:23 AM
Vista March 19, 2010 at 11:40 AM
အမယ် ..ဟိုအရည်ဒွေသောက်လွန်းလို့ မကျန်းမာတော့တာကိုများ
ကောင်မလေးတွေသနားအောင် လာနိုပြမနေနဲ့ 
ကိုဘ ..ဟက်ဟက်.. ခင်ဗျာ့ညီမလေးတွေပဲ သနားချင်သနားမယ်
Vista March 19, 2010 at 11:46 AM
ဒေါက်တို စတိနဲ့ ကုပါလားအင် ..သူက ၇၂ပေါင်ဒွေရသလောက် စုနေတာ ရွက်လှေဝယ်မို့ ဆိုလား ဟိဟိ
ThuHninSee March 19, 2010 at 12:26 PM
Rita March 19, 2010 at 1:00 PM
ထထမဥ က စကတည်းက နှလုံးရောဂါ ရှိတာ မဟုတ်ဘူးလား။
သရုပ်ဆောင်တာနဲ့ နှလုံးရောဂါ ရရအောင် သူလုပ်ပြတဲ့ထဲ ဟုတ်ဟုတ်ညားညားလဲ တခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူး။ အိစိအိစိနဲ့ ပြီးနေတာပဲ။
မို့မို့မြင့်အောင် ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာကို နဲနဲ လက်ခံလို့ရသေးတယ်။ သူက အိုဗာဖြစ်တာကိုး။ ပင်ပန်းမှာပေါ့။
ချစ်သမီး March 19, 2010 at 1:01 PM
:P March 19, 2010 at 6:00 PM
~~~~ကြင်နာသူရေ မကျီစားနဲ့ ~~~ နှလုံးသားလေးက အကြမ်းမခံဘူးကွယ် ~~~~ သီချင်းတောင်ဆိုမိသွားဒယ်...
PAUK March 19, 2010 at 7:39 PM
PAUK March 19, 2010 at 7:40 PM
Phyo Maw March 19, 2010 at 9:37 PM
ဒုတ်ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ် ဆိုမလား
ကြောက်လို့တော့ရယ် မထင်မိဘူး =P
khin oo may March 19, 2010 at 9:45 PM
မေ March 20, 2010 at 3:52 PM
just rememberasong "Fragile heart" by jewel :)
ချစ်ကြည်အေး March 21, 2010 at 1:50 PM
ဒါ...ဒါဟာ ဘွိုင်းzz အတုကြီးပဲ...သိတ်နူးညံ့နေတယ်...
ဆောင်း March 22, 2010 at 12:03 PM
ပန်ကရိယ ကျောက်ကပ် ကလီစာ အလျူခံသည်။
btw, who sang 'Love Me'?
Ko Boyz March 22, 2010 at 10:51 PM
Collin Rayes sang "Love Me"
And what is 'ခသမဟ' ?????
I mean .. THE ONE on ur sidebar!!!!
Ko Boyz March 22, 2010 at 10:53 PM
Better ask kom. lolz
Reply me on here right now!!!!!! :(((
want to know much!!!!
I got it!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
No, thank you! hoooooon